पातलो वीर्यले सन्तान हुन्छ ? - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
म ३० वर्षको भएँ । मेरो बच्चा भएको छैन । वीर्य एकदम पातलो निस्कन्छ । त्यही कारणले मेरो कुनै सन्तान नभएको हो कि ?
कुनै व्यक्ति ३० वर्षको हुँदैमा बच्चाको पिता हुने होइन । तपाईंले पिता हुन कुनै महिलासँगको यौनसम्पर्कपछि भएको गर्भधारणले निरन्तरता पाएको हुनुपर्छ । तपाईंले नभने पनि तपाईं विवाहित हुनु भएको र श्रीमतीले गर्भधारण नगरेको भनेर नै जवाफ दिने प्रयास गरेको छु ।
अण्डकोष लामोसम्म तातो वातावरणमा हुँदा शुक्रकीटको उत्पादनमै कमी आउँछ । त्यसै गरी कोकिन वा अन्य केही लागू पदार्थले पनि शुक्रकीटको संख्या तथा गुणस्तरमा कमी ल्याउँछन् । धूमपान त्यसको अर्को कारण हो । भिटामिन सी, सेलेनियम, जिंक वा फोलेटजस्ता कुराको कमी अर्को कारण हो भने लामो समयसम्म निरन्तर साइकल हाँक्नु पनि त्यसको कारण हुनसक्छ । धेरै मोटो हुनुको प्रभाव पनि यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा केही अध्ययनले देखाएका छन् । केही वंशाणुगत रोगले पनि यस्तो प्रभाव पारेको हुनसक्छ । त्यसैगरी वातावरणीय प्रदूषणको दीर्घकालीन सम्पर्कले पनि वीर्य उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् । विकिरण (एक्स रे वा अन्य)ले पनि शुक्रकीटको उत्पादनमा नकारात्मक असर पार्छ । अर्कातिर पर्याप्त मात्रा स्खलन नहुँदा पनि शुक्रकीटको पूर्ण संख्यामा कमी आउन सक्छ ।
प्रकाशित :चैत्र २, २०७४
यौनसम्पर्क सन्तान उत्पादन र महिनावारी